Wax walba oo aad uga baahan tahay Ciyaarta Manchester United iyo AFC Bournemouth %
Wax walba oo aad uga baahan tahay Ciyaarta Manchester United iyo AFC Bournemouth
By Laacib News	 Last updated Dec 30, 2018
Laacib Sports : Maanta oo axad ah 30-ka December 2018 waxaa wada ciyaari doono Manchester United oo marti qaadeysa Bournemouth kulamada 20-aad ee Premier League-ga si lamida kulankooda u dambeeya sanadka beri ku eg.
Naadiga Kooxda uu sida ku meel gaarka ku maamulayo Ole Gunnar Solskjaer ayaa guuleysatay laba dheel oo xariira isagoona eegaya guushii seddaxaad oo is xigta maanta kulanka ay la leeyihiin Bournemouth.
Laacib ka Manchester United Romelu Lukaku, Alexis Sanchez iyo Anthony Martial ayaa dhammaantood shaki ku jiraa in ay ciyaarayaan iyo inkale.
Ciyaaryahan ka Chris Smalling ayaa la fileyn inuu kasoo laabto dhibaato cagta ah ilaa bartamaha bisha January, halka Scott McTominay iyo Marcos Rojo ay ku dhowyihiin iney soo laabtaan kulankaan.
Kooxda Bournemouth waxaa ka maqnaan doona mudda sagaal bilooda kabtankooda Simon Francis kaddib dhaawac jilibka ah oo kasoo gaaray kulankii Tottenham ay la ciyaareen,Wuxuu kula biiray liiska kabashada ku maqan xiddigaha kala ah Lewis Cook, Adam Smith iyo Dan Gosling.
Waxa laga qoray Ciyaarta
Naadiga Manchester United waxa ay guuldarro la’aan mid kasta oo kamida lixdii kulan ee u dambeysay oo ay Premier League-ga,
Dhanka Kooxda Bournemouth ayaa marnaba Manchester United ku garaacin Old Trafford dhammaan tartamada, waxay qasaareen lix ciyaar iyo kulan bar-baro iyagoona laba Gool ku dhaliyay mudadaas ay la ciyaareen Manchester United.
Shayaadiinta Cas Cas ayaa hal kulan u jirta iney bar-bareeyaan rikoodhkooda ugu badan ee guuldarada sanad laha ah Premier League: oo ah 10 guuldarro, taasoo ay hore ula kulmeen sanadihii 2001, 2014 iyo 2015-kii.
Dhanka Goolasha Waxxaa laga dhaliyay 31-gool horyaalka xagaagan, taasoo kal horeba ka badan inta laga dhaliyay xilli cayaareedkii hore 2017-2018-da.
Kooxda United waa markii u horreysay oo laga dhaliyo in ka badan 30-gool kaddib 19-kulan oo ay dheeshay cayaaraha sare horyaalka tan iyo kal cayaareedkii 1962-63-dii, Naadiga lagu naaneyso The Cherries ayaa qasaartay todoba kamida sagaalkii dheel ee lasoo dhaafay horyaalka.
Kooxda Bournemouth qasaaradii 5-0 ee kasoo gaartay Tottenham waxay aheyd guuldarradii ugu weyneed ee horyaalka Premier League iyo tii ugu weyneed ay la kulmeen horyaalka tan iyo 6-1 guuldarro ah oo kasoo gaartay Watford bishii August 2013-dii.
Shaxda Macquulka ah Labada Koox ee Manchester United iyo AFC Bournemouth
Manchester United iyo AFC BournemouthManchester United vs AFC Bournemouth
Wararkii ugu dambeeyey Kulanka Caawa Southampton iyo Manchester City
Cesc Fabregas “Waxaan go’aan ku gaaray in aan ka tago kooxda”